'I-Red Dead Redemption 2' ine-Serial Killer kwi-Thar Hills-Imidlalo
Ikhaya	Iindaba ezothusayo zoLonwabo	'I-Red Dead Redemption 2' ine-Serial Killer kwi-Thar Hills
'I-Red Dead Redemption 2' ine-Serial Killer kwi-Thar Hills
by UTrey Hilburn III Novemba 28, 2018
by UTrey Hilburn III Novemba 28, 2018 1,776 imbono
Baxolelwe kakuhle ukuba nawe, njengam, usadibana neentaba, iintlambo nemigxobhozo I-Red Dead Redemption 2, ke uyazi ukuba kuninzi onokukufumanisa kwezi nduli zeengingqi. Ezo zinto zifunyanisiweyo zisusela kwi-hysterical ukuya kwi-dang-right chilling.
Enye yezi zinto zifunyanisiweyo kwakusekuqaleni ngaphandle nje kweValentine. Ndiqaphele intaphane yamaxhalanga ejinga ngaphandle, ndaye ndagqiba kwelokuba ndiphande. Ndifumene isiziba sinye esijingxwe kwisakhiwo sebhulorho kunye nezihlomelo kunye namathumbu athe saa. Intloko enqunyulwe intloko yabethelelwa esibondeni ngenowuthi esongiweyo yancamathelisa umlomo. Emva kokubhaliswa, ndafumanisa ukuba sisiqwenga semephu kwaye ndiphume ndinenjongo yokufikelela ezantsi koku.
Kwabo baqhelileyo sele beqhelene nomdlalo, uyazi ukuba umhlaba ovulekileyo ungowamandla amakhulu. Ukukhangela izidumbu ezintathu kulikhoboka kunye nenaliti iyonke kwimeko yehashe. Akuzange kuncede oko, ndandichasene nokujonga iindawo ezikwi-intanethi. Iimeko ezithile zokudlala zinomvuzo ngakumbi xa zifumana ngokwasemzimbeni, ubuncinci zilungiselelwe mna.
Ke, emva kophando olunzulu ndakhokelela kwezinye izigcawu ezibulalayo ezibonisa eyokuqala. Ngamnye unemizimba ekhunjulweyo kunye nentloko enqunyulwe intloko elayishwe ngesiqwenga semephu.
Xa zidityanisiwe kunye imephu ikhokelela kwindlu yangasese yesiphepho ezaliswe ngamaqhekeza amaxhoba aliqela. Ngelixa ukhangela kwigumbi elisezantsi kwehlwempu u-Arthur Morgan utsityiwe kwaye wakhutshwa.
Xa uArthur evuka, i-slim, i-snide, u-Edmund Lowery Jr umi ngaphezulu kuka-Arthur echaza nge-manifesto yakhe, kunye nezinto azicebileyo ngenkwenkwana elishwa.
Ngokuhamba nje kancinci, uArthur uyakwazi ukuguqula iitafile kwaye abulale okanye ahogtie Edmund.
Yindlela epholileyo esecaleni eyayingowokuqala kwamaqanda e-Ista awothusayo asasazeka ngokubanzi RDR2.
Leliphi elona qanda lephasika libanda ukhubeke kulo? Sazise kumagqabantshintshi!
I-Red Dead Redemption 2 iphumile ngoku kuyo yonke indawo.